गोपाल किराँतीको माओवादी र सन्ध्या तिवारीको एमाले खोसियो, कसलाई बढी घाटा ?
केपी ओली नेतृत्वको एमाले र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्रबीच ३ जेठ २०७५ मा एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । सोही वर्ष २३ जेठमा निर्वाचन आयोगले ओली-प्रचण्डकाे नेकपालाई मान्यता दियो । योसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र भन्ने दल रहेनन् ।
केही समयलगत्तै गोपाल किराँतीले निर्वाचन आयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्र दर्ता गराए । किराँती एमालेसँग मिल्न नचाहेका माओवादी नेता थिए । एकता प्रक्रियाप्रति नै असहमति जनाउँदै अलग्गै बसेका उनले नेकपा बनिसकेपछि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएका थिए । केही दिनमै आयोगले उनकाे नाममा माओवादी केन्द्र रहने गरी निर्णय दियाे ।
एकताको एक वर्षपछि नेकपामा दुई अध्यक्षबीच मनमुटाव सुरु भयो । यो विवाद पार्टीभित्रै सीमित थियो । तर, गत वैशाखमा नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विवादास्पद दुई अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्रकाे लडाइँ सतहमा आयो ।
नेताहरू सार्वजनिकरूपमा आरोप–प्रत्यारोप गर्न थाले । यस्तै परिस्थितिमाझ १५ वैशाखमा निर्वाचन आयोगमा विराटनगरकी सन्ध्या तिवारीले नेकपा एमाले दर्ताका लागि निवेदन दिइन् । केही दिनपछि नै आयोगले एमाले नाम तिवारीलाई दिएको थियो ।
यसरी एकताअघि ओली अध्यक्ष रहेको एमाले तिवारीले र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेका माओवादी केन्द्र किराँतीले आफ्नो नाममा पारेका थिए । तर, यही २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ऋषिराम कट्टेलले पाउने तथा एमाले र माओवादी पुरानै स्थितिमा फर्किने गरी फैसला सुनायो । यसपछि ओली–प्रचण्डको नेकपा मात्रै खारेज भएन, किराँती र तिवारीले यसअघि नै दर्ता गरिसकेकाे पार्टीकाे नाम र चुनाव चिन्हसमेत गुमाएका छन् । अर्थात् एमाले ओलीले नै पाएका छन् भने माओवादी केन्द्र प्रचण्डले । २३ जेठ २०७५ पछि दर्ता गरेकाले सन्ध्या तिवारी र गाेपाल किराँती रित्ताे हात भएका छन् । उनीहरूकाे नाममा दल त छ तर उनीहरूले चाहेकाे नाम र चुनाव चिन्ह छैन ।
आयोगले सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको आदेशले एमाले र माओवादी मिलेर बनेको (ने क पा) बदर भई एमाले र माओवादी केन्द्रकै रूपमा कायम रहेकाले २३ जेठ २०७५ पछि यसै नाममा दर्ता भएका पार्टीलाई नाम परिवर्तन गर्न भनेकाे हो । सन्ध्या तिवारी र गाेपाल किराँतीले अब नयाँ नाम र चुनाव चिन्हका लागि फेरि निवेदन दिनुपर्ने छ । यसका लागि आयोगले उनीहरूलाई १५ दिनकाे समय दिएकाे छ ।
कसलाई बढी घाटा ?
सन्ध्या तिवारीले ओलीकै चाहनाअनुसार पार्टी दर्ता गराएको कुरा तत्कालीन नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा छलफलको विषय नै बनेको थियो । वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलगायतले ओलीले एकता भाँड्न एमाले दर्ता गर्न लगाएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
गोपाल किराँती भने आफू नेतृत्वको माओवादी केन्द्रलाई सांगाठनिक रूपमा विस्तार गर्ने तयारीमा थिए । तर, फागुन २०७५ मा महाधिवेशनअघि उनले पार्टीलाई विभाजन हुनबाट जाेगाउन सकेनन् । किराँती नेतृत्वको माओवादी केन्द्र दक्षिणपन्थी संशोधनवाद र अन्ध जातिवादमा फसेको ठहर गरी महाधिवेशन नै बहिष्कार गरेर भूमेश्वर पराजुलीले आफ्नाे अध्यक्षतामा पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्र गठन गरेका थिए । २०७५ सालमा ‘नेपाली मार्क्सवाद’ को विकासमा जोड दिँदै गाेपाल किराँती नेतृत्वकाे माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएकाे थियाे, जसबाट किराँती अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि भने उनी संगठन बिस्तारकाे याेजनामा खासै अघि बढ्न सकेनन् ।
यद्यपि, उनले कतिपय अन्तर्वार्तामा भन्थे, 'माओवादी केन्द्रलाई अघि बढाउँछु, बढाउँछु ।' तर, अब उनीबाट पार्टीकाे नाम खाेसिएकाे छ । तीन वटा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडामा चुनाव लडेकाले आगामी निर्वाचनमा पनि उनलाई यसले फाइदै पुर्‍याउने आकलन थियो ।
अब उनी अध्यक्षबाट पूर्ववत् पार्टीकाे स्थायी कमिटी सदस्य कायम भएका छन् । एमालेसँग मिल्नुअघिकाे माओवादी केन्द्रमा उनी स्थायी कमिटी सदस्यकाे हैसियतमा थिए । विराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलनबाट उनी साे पदमा निर्वाचित भएका थिए । माओवादी स्थायी कमिटीका एक सदस्य किराँतीलाई घाटाभन्दा नाफै भएको बताउँछन् । भन्छन्, 'एउटा सानो पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो, हामीतिर आउनुभयो भने ठूलो पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य पद छँदै छ, जुन आफैँमा नेतृत्वकाे पद हो ।'
तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्धका बेला कुनै जिम्मेवारी नदिएपछि खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा ब्युँताई किरात वर्कर्स पार्टी बनाएर उनी पूर्वमा सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेका थिए । तर, २०५९ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीसँग एकता गरी केन्द्रीय सदस्य बने । २०६० सालमा पार्टीको पोलिट्ब्युरो सदस्य हुँदै स्थायी कमिटी सदस्य बनेका उनलाई पछि माओवादीले संस्कृतिमन्त्री बनाएकाे थियाे ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २५, २०७७, १८:२३:००